Tenga YouTube Komendi DisLikes [ZVINODZIDZISWA] Dzakachipa & Chaizvo Maprofiles
Tenga YouTube Komendi DisLikes (MAVHIDHIYO) Akachipa
Izvo zvemukati zvemhando yepamusoro uye zvakadaro hazvisi zvinzvimbo zvepamusoro kana kusabatanidzwa mumavhidhiyo ako? Izvi zvinogona kunge zviri izvo kuti yako YouTube chiteshi haina SEO-yakagadziriswa. Asi, ko kana iwe wakazviita futi? Muchiitiko icho, izvo zvinoridza bhero ndezvekuti urikushaya pasevhisi iyo Sociic inokupa iwe pamutengo unodhura, ichikubvumidza iwe kuti utenge YouTube Comment Dislikes (mavhoti) pane zvakasiiwa nevashandisi pane ako YouTube chiteshi mavhidhiyo.
Dzimwe nguva kutenga kuda pane ako YouTube zvirevo zvinogona kusashanda uye ndipo paunofanirwa kuyedza kutenga izvo zvisingadiwe. Izvo zvisingafadzi hazvizoitwe pamashoko ako asi pane zvevakwikwidzi. Kunyangwe isu tichiziva kuti zvisingadiwe hazviratidze zvisinei nekuti vanhu vangani vasina kufarira chirevo ichi, zvinokanganisa SEO yevhidhiyo yemukwikwidzi zvishoma nezvishoma uye mhedzisiro yekupedzisira ichakanganisa zvine mutsindo vhidhiyo yemukwikwidzi wako.
Kutenga kusada pa Sociic ichave imwe yesarudzo iri nyore uye yakapusa yauchatora kuitira kuti uwedzere masosi evhidhiyo yako yeYouTube, uchienzaniswa nemakwikwi ako. Kuwana ekumusoro maoko pamusoro pevanokwikwidza kuchakubatsira iwe kuti uwane kuwonekera kune ako mavhidhiyo. Saka, wakamirirei? Ona kuti nderipi zano rinoenderana nezvaunoda uye taura nesu kuti titenge iyo package inowana inogutsa.
50 Komendi DisLikes (ZVINODZIVA)
100 Komendi DisLikes (ZVINODZIVA)
200 Komendi DisLikes (ZVINODZIVA)
500 Komendi DisLikes (ZVINODZIVA)
1000 Komendi DisLikes (ZVINODZIVA)
2000 Komendi DisLikes (ZVINODZIVA)
5000 Komendi DisLikes (ZVINODZIVA)
10000 Komendi DisLikes (ZVINODZIVA)